Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment बाढीमा परी २० को मृत्यु, अधिकांश बालबालिका - Pnpkhabar.com
बाढीमा परी २० को मृत्यु, अधिकांश बालबालिका
अम्मान, ९ कात्तिक: जोर्डनमा आएको बाढीमा परी कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश विद्यालयका छात्रछात्राहरू रहेको अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् । स्थानीय एक पत्रिकाले यस घटनालाई दुःखान्त घटनाको संज्ञा दिएको समाचारमा जनाइएको छ । घटनामा परी अरु ३५ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार आएको अत्यधिक बर्षाका कारण जोर्डनमा बाढी आएको हो ।
घटनामा परेकाहरूलाई खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलगायतका विभिन्न निकायका उद्धारकर्ता तथा सहयोगीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए ।
घटनास्थलमा अहिले पनि सुरक्षाकर्मीहरूले हराइरहेका आठ जनाको खोजी गरिरहेको एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । पश्चिमी अम्मानदेखि झण्डै ५० किलोमिटर टाढा पर्ने सो घटनास्थल पर्यटनका लागि लोकप्रिय क्षेत्र मानिन्छ ।
मृत्यु भएका मध्ये अधिकांश ११ देखि १४ बर्षका रहेका थिए । उनीहरू विद्यालयबाट भ्रमणका लागि त्यस तर्फ गएका थिए । विद्यार्थी बोकेको बस बाढीले बगाएको थियो । यति ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकको निधन भएपछि जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्धितीयले बहराइनको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको छ ।
भारतीय संसद्मा नेपालको पक्षमा बोल्दै : नेपालको चित्त दुखाउनुमा ठूलो अन्तर छ ! (भिडियोसहित)
अमेरिकामा कोरोनाबाट ‘एक लाख’ मानिसले ज्यान गुमाए : वल्र्डओमिटर्स
आइतबारको तुलनामा सोमबार संक्रमितको संख्यामा केही कमी
रुसमा एकै दिनमा नौ हजार कोरोना सङ्क्रमित, ९२ को मृ’त्यु
अमेरिकामा मृतकको संख्या एक लाखको हाराहारीमा, विश्वभर ३ लाख ४६ हजारको मृत्यु
भारतीय सेनामा जागिर खाएका हौं, मुटु त मातृभूमिकै लागि धड्किन्छ !
दाईबाट बहिनी ब’लात्कृत
शिक्षकद्वारा बालिका ब’लात्कृत
नयाँ क्वारेन्टिन निरीक्षण गर्न गएका वडाध्यक्षको क्वारेन्टिनमै मृ’त्यु
एक गर्भवती महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ८३ पुग्यो
हावाहुरीले रुख ढाल्दा ६ वर्षीय बालकसहित दुईको मृ’त्यु
कोरोना प्रभावित महाराष्ट्र र दिल्लीबाट नेपाली धमाधम घर फर्कँदै
भारतबाट फर्किएका एक युवकको अस्पताल पुग्ने क्रममै ज्यान गयो
आइसोलेसनमा राखिएका एक पुरुषको ज्यान गयो